Heshiiska: ZTE wuxuu ka shaqeyn doonaa Mareykanka xaalado kala duwan | Androidsis
Maalmo ka hor, waxaan kugu wargalinay dhamaadka dhibaatooyinka ZTE ee waaxda ganacsiga Mareykanka. Hagaag, tani way ka rasmi badan tahay sidii hore Shirkaddu waxay si rasmi ah u shaacisay in laga qaaday xayiraaddii ay shirkadda ZTE ka mamnuucday inay ganacsi la yeelato shirkadaha Mareykanka. Tani waxay hadda u oggolaan doontaa shirkadda Shiinaha, oo ah mid ka mid ah soo saarayaasha qalabka isgaarsiinta ee dhulkan, inay dib u bilowdo howlaheedii ganacsi ee ugu weynaa dalkan.
Iyadoo tan ayaa horeyba u dhacday maalmo ka horMaanta, in ka badan sidii hore, dhammaan shuruudaha waa cad yihiin. Xusuusnow in dhibaatadu bilaabatay ka dib markii shirkaddu jebisay heshiis ay wada galeen ka dib markii ay qirtay dambiga ah shixnadaha sharci-darrada ah ee alaabada iyo teknoolojiyadda Mareykanka ee Iran, iyada oo lagu xadgudbayo cunaqabateynta Mareykanka ee la saaray.
Iyada oo qayb ka ah heshiiska, shirkaddu waxay dhigatay $ 400 milyan oo koonto ah. Heshiiska escrow wuxuu qeyb ka yahay heshiis kale oo gaaraya $ 1.400 bilyan oo ay la gashay waaxda ganacsiga qaranka bishii hore si dib loogu soo celiyo marin u helida bixiyeyaasha Mareykanka oo taleefannadooda ay ku tiirsan yihiin qeybahooda.
Heshiiska cusub ayaa sidoo kale waxaa ku jira ganaax dhan 1.000 bilyan oo doolar. in ZTE ay bixisay Khasnadda Mareykanka bishii la soo dhaafay iyo $ 400 milyan ee ku jirtay koonto qarsoodi ah oo uu ilaaliyo Mareykanka. Waxaa xusid mudan, in dowladdu ay u qaadan karto qaddarka koontada gelitaanka haddii ZTE ay jabiso heshiiskii ugu dambeeyay. Maxaa intaa ka badan, Shirkadda Shiinaha laga rabay inay ku beddesho guddoonkeeda iyo maamulkeeda muddo 30 maalmood gudahood ah. Sidoo kale waa inaad kireysataa kormeeraha u hoggaansamida dibadda ee ay soo xushay Waaxda Ganacsiga.
Ugu dambeyntii Waxaa la isku raacay in loo oggolaado dowladda Mareykanka inay booqato xarumaha shirkadda iyadoon xaddidneyn si loo xaqiijiyo in qaybaha Mareykanka loo adeegsanayo sida ay sheegtay shirkadda. Intaa waxaa dheer, waa inaad ku daabacdaa faahfaahinta qaybaha Mareykanka ee alaabtaada boggaaga Shiinaha iyo Ingiriisiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Heshiiska: ZTE wuxuu ka shaqeyn doonaa Mareykanka xaalado kala duwan